China Led Corn Cob Retrofit Bulbs China Manufacturers & Suppliers & Factory
Led Corn Cob Retrofit Bulbs - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Led Corn Cob Retrofit Bulbs)
Bbier 120W Led Corn Bulb abụghị onye ofufe, ọ dịghị mkpọtụ na ikpo ọkụ dị elu maka ọkụ na ọkwọ ụgbọala. Nke a Led Corn Cob Retrofit Bulbs na- echekwa ihe karịrị pasent 80 nke ọkụ eletrik site na dochie 350W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ ndụ nke Led Corn Bulb E27 bụ ihe karịrị 50,000 awa, 5 ugboro bulb bọlbụ. Ìhè akara ogo...
IP65 40W Led Corn Cob Lamps Mogul Base
Nke a dị elu nke 40 Watt Corn Cob Led Mogul Base bụ nnọchi a na-anọchi anya 100-Watt incandescent. Ọkpụkpụ anyị Led Corn Cob Lamps nwere ndụ ndụ nke 50,000 awa na nke a Corn Cob Led Light Bulbs UK nwere 4800 Lumens. Nke a mere ọka cob ìhè bulbs nwere otutu ojiji dika Yard Light, Light Socket na Barn Light. Nke a 40w...
80W kpụrụ ọkụ na bọtịnụ DLC ETL
80W kpụrụ ọkụ na bọtịnụ DLC ETL Bbier 80W Led Corn Bulb ọkụ abụghị onye ofufe, ọ dịghị mkpọtụ na ikpo ọkụ dị elu maka ọkụ na ọkwọ ụgbọala. Nke a Led Corn Retrofit Bulbs na- echekwa ihe karịrị pasent 80 nke ọkụ eletrik site na dochie 250W MH / HPS / HID. Mmiri ndụ nke Led Corn Bulb E39 nwere ihe karịrị 50,000 awa, ìhè...
Elu ike ọka bulbs 5000K ìhè ìhè
Elu ike ọka bulbs 5000K ìhè ìhè Bbier elu igwe ọka bulbs abụghị fan, ọ dịghị mkpọtụ na top àgwà okpomọkụ sink maka LEDs na ọkwọ ụgbọala. Igwe ọkụ ọkụ a na Led Corn na -enye ihe karịrị pasent 80 nke ọkụ eletrik site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ ọkụ nke Led Corn Bulb 5000K karịrị awa 50,000, ìhè akara ogo 360,...
kpochapu oku E39 100 watts
kpochapu oku E39 100 watts Bbier 100W na-eduzi bọlbụ ọka, ọkụ ọkụ kachasị elu maka ọkụ na ọkwọ ụgbọala. Led Corn Bulb 100 watts na- echekwa ihe karịrị pasent 80 nke ọkụ eletrik site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ọkụ nke ìhè Led Bulb 100w nwere ihe karịrị awa 50,000, ìhè akara ogo 360, ntụgharị ndepụta dị elu. Na...
Ahịa ọka bọọlụ 100W DLC na-ere ahịa
Ahịa ọka bọọlụ 100W DLC na-ere ahịa Ọnụ ọgụgụ ndị na-acha ọkụ ọkụ bụ Corn Corn bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị na-eme ka ọkụ dị ọkụ na -eme ka ọkụ dị ọkụ, HPS, HID, na ọkụ ndị ọzọ. Ihe mgbagwoju anya ha dị ogo 360 na ihe nkedo dị mfe, nke dị na E39 Mogul base (nakwa maka nkedo dị ala, ọkwa E26 dịka nke ọma). A na-akpọ ha...
Led Corn Cob Retrofit Bulbs E27 Led Corn Cob Retrofit Bulbs Led Corn Cob Light Bulbs Led Corn Cob Bulbs Led Corn Cob Bulb E27 Led Corn Cob Light Bulbs Corn Cob Light Bulbs Led Corn Bulbs